I-Blue Mountain Cottage-Inobuhlobo Nezilwanyana - I-Airbnb
I-Blue Mountain Cottage-Inobuhlobo Nezilwanyana
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJerry
UJerry ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhaya elincinci elihle eliseMonticello. Eli khaya kulula ukufikelela kulo kwaye linento oyifunayo ngokuhlala kwakho. Eli khaya line-wifi kwaye linobubele kwisilwanyana sasekhaya. Sibiza intlawulo eyongezelelweyo yesilwanyana sasekhaya se-$50 ngesilo-qabane ngasinye. Oku kukuhlala okugqibeleleyo ukuba udlula nje. Akukho kutshaya ngaphakathi kwiyunithi. Eli khaya libuyela kwibala lengca elineembono zeentaba zaseSan Juan eColorado ukuya empuma kunye nemibono yeeNtaba eziBlue ukuya entshona.
Ikhaya elincinci elihle eliseMonticello. Eli khaya kulula ukufikelela kulo kwaye linento oyifunayo ngokuhlala kwakho. Eli khaya line-wifi kwaye linobubele kwisilwanyana sasekhaya. Sibiza intlawulo eyongezelelweyo yesilwanyana sasekhaya se-$50 ngesilo-qabane ngasinye. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ukuba udlula nje okanye ufuna indawo ekufutshane ukuya ezantsi edolophini ukubaleka ixesha elide. Eli khaya linemvakalelo epholileyo kunye nendawo eninzi ngaphandle kunye neembono zamasimi asefama avulekileyo kunye nokupaka ezitalatweni.
Indawo erentwayo yindlu yokulala emi-2 yokuhlambela e-1 kwindawo ephantse ibe yi-1/5 yeehektare ezibuyela kwibala lengca elineembono zeentaba zaseSan Juan eColorado ukuya empuma kunye neembono zeeNtaba zeBlue ukuya entshona. Le ndlu inegumbi lokuhlala elivulekileyo / ikhitshi, indawo yokulala yodaka kwaye ingaphakathi. Ukuhamba umgama ukuya kwiindawo zokutyela, iivenkile, iivenkile eziluncedo, ithala leencwadi, iipaki kunye neekhilomitha ezili-1.5 ukusuka kwiTempile yeLDS. Ibekwe kwindawo ezolileyo ebumelwaneni enezitrato ezibanzi ezibonelela ngabucala. Akukho kutshaya ngaphakathi kwiyunithi.
4.39 · Izimvo eziyi-41
Le ndlu ifuna idiphozithi ye$150. Iza kutsalwa yodwa yile ndlu ngaphambi kokuba ufike okanye xa ubhalisa xa ufika.